Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibada ayaa sheegay in xil ka qaadistiisi ahayn wax soo boodo ah… – Hagaag.com
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibada ayaa sheegay in xil ka qaadistiisi ahayn wax soo boodo ah…
Posted on 20 Nofeembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inaanay xil ka qaadistiisii ahayn wax soo booddo ah, balse uu la socday.
Axmed Ciise Cawad ayaa Khamiistii xilka looga qaaday wareegto ka soo baxday Xafiiska Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoona Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Wasiir Cawad ayaa sheegay in subaxnimadii Khamiistii ay kulmeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla-markaana uu ku wargeliyay in xilka Wasiirnimada laga qaadayo, sidoo kale waxa uu sheegay in Madaxweynuhu uu u soo bandhigay jego Safiirnimo, taasoo sida uu sheegay uu ka cudurdaartay.
Wasiir Cawad ayaa dhanka kale beeniyay in xilka looga qaaday beenintii uu beeniyay warqaddii ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ee Dowladda Federaalka kaga hadashay dagaalka ka socda dalka Itoobiya.
Cawad oo u waramay BBC ayaa meesha ka saaray in wax khilaaf ahi uu kala dhaxeeyo Madaxda Dowladda Federaalka.
Wasiirka cusub ee lagu soo bedelay ayaa noqonaya Wasiirkii Arrimaha Dibadeed ee ugu mudada yaraa, marka aad eegto mudada ka harsan muddo xileedka Dowladda Federaalka.